Ukutya okuDibanisa, ukutya okongeziweyo, iZongezelelo zeCosmetic-Honray
Umthengisi oChwepheleyo weAmino Acid.
Dibana neFCC / AJI / USP / EP esemgangathweni
Iasidi yeamino esetyenziswe kwiFeed / Ukutya / amayeza / izinto zokuthambisa
U-Hebei Honray Imp. & Ex. Efumaneka eShijiazhaung, e-Hebei, e-Chiina Ngaba ngumthengisi we-Amino Acids oqeqeshiweyo. Sijonge kwii-Amino Acids ngaphezulu kweminyaka engama-20. L-Lysine, L-Threonine, L-Tryptophan, L-Methionine, DL-Methionine, L-Valine, L- Leucine, L-Isoleucine, L-Phenylalanine kunye neGlycine (ii) mveliso zethu ezomeleleyo.
Igama: L-Lysine HCL
Iihagu Namaqanda Bhabha Umbona Uphambene, Amakethi e-Amino Acid ayayeka ukuThabatha
Xa ukukhutshwa kwamandla amatsha kuhlangana nentsholongwane yesithsaba esitsha kwaye ukuhanjiswa kungaphezulu kwemfuno ...
262020 / Okthobha
Kwixesha elizayo elikufutshane, imakethi yemethionine ibisebenza ngaphakathi kuluhlu olusezantsi lwembali, kwaye kutshanje iye yehla. Ixabiso langoku li-RMB 16.5-18 / kg. Umthamo omtsha wemveliso yasekhaya ukhutshwa ngokuthe ngcembe kulo nyaka. Unikezelo lweemarike luninzi kwaye uluhlu oluphantsi luyahamba. I-Euro ...
I-raw cor ...
Emva koMnyhadala waMaphakathi-Ekwindla kunye noSuku lweLizwe, ixabiso lombona lenyukile, kwaye ixabiso lokuthengwa kwendawo ngoku lidlulile kwi-yuan / ngetoni engama-2 600, iminyaka emine ephezulu. Ukuchaphazeleka ngokunyuka kweendleko, iinkampani ze-lysine kunye ne-threonine zisandula ukuphakamisa iikowuteshini zazo emva kwenye. Intengiso yeLysine ...
I-L-Valine 72-18-4, Ikhemesti yeBakala L-Leucine, 73-32-5 L-Isoleucine, L-Threonine Pharm kwiBakala, L-Threonine kwiBakala lokutya, Ukutya kwezilwanyana,